MAHAD CAWAD XASHARO INUU GUDOOMIYO SHIRKAN WAA QALAD AAN LA QAADAN KARIN | Wacyigelin's Blog
Ahmed Galaydh on U ISTAAG SOMALIA MPLS MNmohamed anshur on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…سليمان on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…siciid on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Abdirizaak ahmed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…mohamed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Dr. Farxaan jama on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…Peter Greste case: i… on Al-Jazeera’s Peter Grest…Johnd761 on LOS ANGELES CITY PLANER FAISAL…Mahad xiddig on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on العلم والإيمان – د. مصطف…Bucul on DHOWR ASKERI OO KA GOOSATAY JA…En ismail abdi yasin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…yassin saleh osman on KA TASHADA CADAAWOHOO ISKU TII…	MAHAD CAWAD XASHARO INUU GUDOOMIYO SHIRKAN WAA QALAD AAN LA QAADAN KARIN
Posted on November 19, 2013 by wacyigelin	Xasharo sida aan la soconoba wuxuu ahaa nin taageersan go’aanka madaxweynaha hadii uu qaldanyahay iyo hadii uu saxanyahayba marka ma noqon karo nin gar cadaalad ah goyn kara. Waxa ku haboontahay arintu in la sugo inta uu kasoo noqonayo gudoomiyaha baarlamaanku dabadeedna la galo sidi si xaq ah loogu wajihi lahaa khilaafka labada masuul.
Waxay u muuqataa in laga faaiidaysanayo inta uu dalka ka maqanyahay gudoomiyaha baarlamaanku si loo meel mariyo howlo laysla meel dhigay oo aan socon lahayn hadii baarlamaanku u dhamaa lahaa ama si sax ah loo wajahi lahaa ciddi ku guulaysanaysa ha ku guulaysatee.
Khilaafkan cid walba si ayay u fasiratay inta bandanna dadku waxay isla dhex marayaan inuu ku salaysanyahay magacaabidda wasiirada cusub oo ay ka maqanyihiin rag ay madaxweynaha isu dhow dhow yihiin ra’yi iyo siyaasad ahaan. Taas ayaana keentay ayaa la leeyahay in madaxweynuhu dalbado iscasilaadda r/iisulwasaaraha. Arintan waxa cadayn u noqonaya oo sii iftiiminaya marki dhowaan wasiiro iyo wasiir ku xigeeno liiskooda la soo dhigay baraha wararka internetka Soomaalidu ku leedahay kuwaas la leeyahay waa ay iscasilayaan maadaama aanay kalsooni kala dhexeeyn ra’iisulwasaaraha. Dabcan, waa ayba tahayba inay iscasilaan si ay arinta u murjiyaan maadaama ay isu arkaan inaanay ka muuqaan liiska cusub ee lasoo magacaabayo. Taa keliya maaha ee waxaa ay qayb ka yihiin olole lagu xumaynayo r/wasaaraha laguna marin habaabinayo shacabka si ay ugu arkaan nin aan wax hogaamin karin. Taas waxaa sii dheer dacaayado ay baraha wararka Soomaalidu qorayaan oo ku salaysan been aan raad lahayn iyo kutiri kuteen. Kuwani waxay ka dhigayaan inaanay dowladda uu hogaamiyo Saacid aanay waxba qaban laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa, “Sadar muuqda su’aal ka dhan” oo wixi la qabtay waan wada aragnaa iyadoo taa abaal looga wada hayo dowladda iyadoo aan lakala soocaynin r/wasaare, madaxweyne, ra/iisul baarlamaan, wasiiro iyo dhamaan howlwadeenada kaleba. Haddaba marki aan aqriyo waxyaabaha ay soo qoraan waxa aad uga muuqata caadifad qabiil oo keliya iyadoo mararka qaar jawaabo adag ay dhinaca kale soo qoraan kana turjumaya sidoo kale caadifad qabiil.
Waxaa xusid mudan in aanu madaxweynuhu soo bandhigin sababta keentay khilaafka si ay shacabku ula socdaan wax jira. Waxay u muuqataa in uu ka xishoonayo madaxweynuhu inuu sheego waxa jira amaba aanu haynin sababo waafi ah oo uu ku dalbanayo iscasilaadda r/wasaaraha. Haddaba waa laga haboonyahay in ay dowladdu u dhaqanto sidii dowlad kalitalis ah oo go’aanadi la doono marki la doono layska qaato waxaana haboon inay dowladdu arimaha jira shacabka la socodsiiso sidoo kale ay la tashi la samayso dadka wax garadka ah oo aan arintan ku lugta lahayn sida dadka dhexdhexaadka ah ee aanu qabiil ama urur aan ku tiirsanayn ee ku jira baarlamaanka.
Hadda sida arintu u muuqato waxaa socda afgenbi lagu samaynayo gudoomiyaha baarlamaanka, ku xigeenkiisa, iyo inta kale ee si cadaalad ah arinta u wajahi lahayd. Hadii Xasharo loo xil saaro oo uu gudoomiye ka noqdo xubnaha baarlamaanka ka tirsan ee gelaya arintan waxaan dhihi karaa waa xaqdaro maxaa yeelaay Xasharo wuxuu toos ula jiraa madaxweynaha oo dhowr jeer ayuu eedda dusha ka saaray r/wasaaraha asagoo weliba leh waa inuu iscasilaa.
Waxaan u malaynayaa inay cid walba garan karto marki uu gartaada qaado ninki aad la garamaysay sida ay wax noqonayaa. Xasharo u xilsaaridiisa arintan waa sidaas oo wuxuu la mid yahay ninkii lala garmayey maadaama ay isku mowqif yihiin weliba uu qayb ka ahaa ololaha loogu jiro sidi looga takahlusi lahaa Saacid. Taas anigu iska dhihimaayo oo hadaladiisa ayay ka muuqatay mar kasta oo uu waraysi bixiyo.
Ugu danbayn, Waxaan dhihi lahaa madaxweynuhu arintan dib ha uga fiirsado hana ka fikiro cawaaqib xumida ka imaan karta. Waxaa hubaal ah in ninki kale oo yimaadana ay isku dhacayaan maadaama uu isku dayi doono inuu ku dhamaysto howlihiisa muddo hal sano ah maadaama asagna hal sano kadib laga takhalusi doono waa taariikhda soo jireenka ehe. Taas keliya maaha ee waxaa uu samayn doonaa ninka la magacaabo inuu ugu horeyn ka takhaluso ragga wasiirada ah ee isbahaysiga ku jira si aanu usoo noqon isbahaysigu mar danbe asagana caqabad ugu noqon. Waxaa muuqata in waqti dheer ay ku dhumin doonto dowladdani is jiijiid keeni kara ina lumiso taageero badan oo ay hadda haysato iyo weliba dadka Soomaalida ah ee kusoo qulqulaya dalka in ay dib u furtaan boorsooyinkooda maadaama meeshu sidi la filayey aanay ahayn.
Filed under: Uncategorized « Gudoomiyaha Isbaheysiga Nabadda Abdullahi Sheekh muxuu ka yiri khilaafka madaxweynaha iyo R/wasaaraha? DR. BAADIYOOW OO UU HELAY WERIYIHII KU KEDIYAY CALI GEEDI »